nepali film – An Online Entertainment News Portal
समीक्षकको नजरमा ‘बर्ष ०७५मा नेपाली फिल्म’
April 10, 2019 sutraentertainment 0
दिपेन्द्र घिमिरे (सुत्र इन्टरटेनमेन्ट) – बर्ष ०७५मा कुल ९६ वटा फिल्म प्रदर्शनमा आए । प्रदर्शनमा आएका मध्य १ दर्जनले आफ्नो लगानी सुरक्षित गरे होला भने ब्यवसायिक रुपमा हिट फिल्मको लिस्टमा ५ फिल्म पनि मुस्किलले परे […]
प्रदिप खड्काः के मा बलियो, के मा कमजोर ?
March 10, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेता प्रदिप खड्कालाई आज बिहानदेखि भ्याइनभ्याई छ । आज बिहानैबाट उनलाई शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । ललितपुरको कुसुन्तीमा सारदा खड्का र टेक बहादुर खड्का पुत्रको रुपमा जन्म लिएका उनले मार्केटिंग विषयमा मास्टर्स समेत […]
विदेशी फिल्म सामु कमजोर बन्दै नेपाली फिल्म
February 15, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली फिल्ममा देखिएको सुस्त रोगले अहिले निर्मातादेखि वितरक दिक्क छन् । हलमा मानिस नआउँदा देखिएको दिकदारीले सबैलाई हैरान बनाएको छ । आजबाट रिलिज भएको सिनेमा बुलबुल सिंगल हलमा कमजोर देखियो । मल्टिप्लेक्समा औषत […]
नेपाली फिल्मका दर्शक हराए कि हराइयो ?
February 4, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट-आइतबार बिहानै अभिनेता दिपकराज गिरीले फेसबुकमा एउटा स्टाटस कोरे । उनले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले नेपाली फिल्मको बर्तमान अवस्था बोलेको थियो । दिपकले लेखे, दर्शक हराएको सूचना । दिपकले यो लेख्दै गर्दा उनको स्टाटसमा सकारात्मक […]
कलाकारको पारिश्रमिकको सधै लफडा
January 22, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टर टेन्मेन्ट-कलाकार राजाराम पौडेलले सिनेमा क्याप्टेनको पारिश्रमिक आफूले नपाएको भन्दै गुनासो गरे । आफूलाई डबिङमा पनि नबोलाएको भन्दै उनले पारिश्रमिक नदिएसम्म अघिको काम नगर्ने बताए । उनले, अरु कसैको आवाजमा डबिङ गराएको खण्डमा आफूले […]
१० बर्षे च्यालेञ्जमा सेलिव्रेटीको रुप बदलियो, तर अभिनय
January 18, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली कलाकारले अरुको च्यालेञ्ज मात्र लिने कि आफूले पनि च्यालेञ्ज दिने ? सामाजिक संजालमा बेला बेलामा कस्ता कस्ता प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछन् । यस्ता खालका प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा अघि त नेपाली सिनेमाका कलाकार नै हुन्छन् […]
फिल्ममा एक्सन हलमा सिठ्ठी बजाउन मात्र हो त ?
January 17, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली सिनेमामा एक्सन हिरो भनेर निखिल उप्रेती र विराज भट्टलाई मानिन्छ । तर, एक्सनकै कुरा गर्दा अभिनेता शिव श्रेष्ठ अझै अगाडि छन् । शिव श्रेष्ठलाई पनि नेपाली फिल्ममा एक्सनका राजा नभनिएको होइन । तर, […]
भ्रष्टचारी र प्रेम देखाएर फिल्म चल्छ त ?
January 16, 2019 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- फिल्मको कथावस्तुमा नयाँपन खोज्न आवश्यक छ । कथावस्तुमा दर्शकलाई तान्न पनि आवश्यक छ । तर, फिल्मको कथावस्तुमा फरक हुने वित्तिकै चलिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । फरक फिल्म बनाउनका लागि रामशरण पाठक चिनिएका छन् […]
विकिनीले चम्काएन हिरोइनको करिअर
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- फोटोसुट होस् या सिनेमामा नै किन नहोस्, हिरोइनहरुलाई विकिनी लगाएर हट बन्न आपत्ती छैन । विकिनीमा हट बनेर देखिदा दर्शकको क्लिकमा पर्ने र हिट हुने आशा त सबैलाई होला नै । तर, के […]
फिल्म जुध्छन् कि जुधाइन्छ ?
December 16, 2018 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपाली फिल्मको बजार साँघुरो छ । हामीले बजार खोज्ने प्रयास गरेका छैनौ । बरु, हामी सिमित बजारमा अरु फिल्मको भन्दा २-४ शोज बढी पाउँदा, २–४ हल बढी पाउँदा मख्ख पर्छौ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा […]
रेनशा र प्रज्ज्वलले गरे इङ्गेजमेन्ट (फोटो/भिडियो सहित)
फिल्म ‘राम राम’मा सौगात मल्ल फाइनल
दोश्रो हप्तामा पनि आक्रामक ‘ए मेरो हजुर ३’, अनमोल र सुहाना हलमा पुग्दा जे देखियो (फोटो फिचर)
चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’को पोस्टरसँगै दोश्रो गीत सार्वजनिक
छोराका बाबु बने अभिनेता आर्यन सिग्देल
यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्ध साथ दिन तयार छौँ – अभिनेत्री दीया मास्के
आकाश र बर्षासँगै अनुभव र सेड्रीनाको ‘पिरतीमा यस्तै हुन्छ रे’
चर्चाको भोक कराएको कि आक्रोस पोखेको बिनोद जि ?
आशिफ र रेश्माको ‘हेरन कान्छी’ (भिडियो)
यात्राको ‘फ्लाइङ्ग’ गीत सार्वजनिक
#nepalimovie aanchal sharma anmol kc barsha raut bhuwan kc celebrity gossip dashain tika deepa shree niraula gossip kollywood celebrity gossip kollywood gossip lates celebrity gossip lates kollywood gossip latest kollywood gossip nepali actress Nepal Idol nepali film New Nepali Movie Paul Shah Pooja Sharma pradeep khadka prem Geet2Priyanka Karki Rekha Thapa Samragyee Rl Shah